Posted by Tranquillus | Déc 11, 2018 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Ka dib maqaalkeena si aan kaaga caawino inaad qorto a email si looga jawaabo codsiga macluumaadka ee ka yimid laga soo bilaabo saaxiibHalkan waa maqaal kaa caawinaya sidii aad uga jawaabi lahayd codsiga macluumaadka kormeeraha.
Talooyin ku saabsan ka jawaabista codsiga macluumaadka kormeeraha
Waxyaabaha ku jira emaylka loo diray kormeerahaaga waxay la mid noqon doonaan kuwa aad u diri karto saaxiibkaa, kaliya codka ayaa isbeddelaya. Wax kasta oo ay tahay mawduuca codsiga macluumaadka, iimaylkaagu waa inuu sidaa darteed ku daraa:
Soo celinta codsiga
Qodobka ugu muhiimsan ee jawaabta suurtogalka ah, ama haddii ay lagama maarmaan tahay calaamadda qof kaa caawin kara inuu ka fiican yahay
Jumlad muujineysa inaad adigu ku jirto.
Halkan waa tusaaleyaal email ah si aad si habboon uga jawaabtid kormeeraha kaa codsada macluumaadka.
Mawduuca: Codsiga macluumaadka ku saabsan mashruuca X
Waxaan kuugu soo laabanayaa codsigaadii aad ka heshay macluumaad ku saabsan Project X oo aan ka mid ahaa. Fadlan waxaad ka heleysaa ku soo lifaaqa daqiiqadaha kulankan ee mashruuca iyo warbixinta xidhitaanka mashruuca. Waxaan sidoo kale ku soo lifaaqayaa bilawga bisha ugu dambeysa oo ku siin doona fikrad ah horumarka mashruuca mudada ku habboon.
Waxaan u ogolaanayaa naftayda inaan magaciisa [asxaabtiisu magaceeda ku dhejiso] nuqul ka mid ah emailkan. Wuxuu aad ugu mashquulsan yahay goobta wuxuuna awoodi doonaa inuu kuugu sheego wax ka sii badan oo ku saabsan dhammaan dhinacyada hawlaha badan ee mashruuca.
Waan ku sii jirayaa wixii aad macluumaad dheeraad ah hayso,
Fariin email u dir si aad uga jawaabto codsiga macluumaadka kormeeraha Agoosto 26th, 2020Tranquillus
READ U dir iimayl kormeerahaaga: waa maxay qaacidada edeb leh ee aad isticmaalayso?
horeEmail template si aad uga jawaabto codsiga macluumaadka qof ka mid ah saaxiibka
socdaKulanka kulanka shaxda emailka